Mila Sheet Metal FABRICATION? - China Ruizheng Industry
Mila Sheet Metal FABRICATION?
Mila Sheet Metal FABRICATION? Mifidiana Voamarina Supplier:
Bebe kokoa momba ny Sheet Metal FABRICATION
Sheet vy FABRICATION dia mampiasa taratasy vy mba hanorina milina sy ny rafitra vy. Mety ho sarotra dingana maro samy hafa momba matihanina. Orinasa misahana ny taratasy vy FABRICATION dia mahazatra antsoina hoe FABRICATION fivarotana, na fivarotana fab ho fohy.
Sheet vy FABRICATION ankapobeny midika nanapaka sy nandoro ny lamba metaly. Special fitaovana, toy ny tarika tsofa, dia ampiasaina mba hanapaka ny lamba metaly. Band tsofa manokana nanamafy lelany ary afaka nanome sakafo ny taratasy vy mba hahazoana antoka na dia fanapahana.
Chops tsofa ihany koa ny ampiasaina ao amin'ny taratasy vy FABRICATION. Mitetika tsofa dia mitovy amin'ny hamama tsofa, nefa manana Marokoroko sy kapila manokana natao ho an'ny metaly nanapaka taratasy. Manapaka fanilo ihany koa ny ampiasaina ao amin'ny taratasy vy FABRICATION. Manapaka fanilo no tariby ny fanapahana lehibe fizarana ny taratasy vy amin'ny ezaka kely indrindra.
Sheet vy FABRICATION ihany koa ny mahakasika ny fampiasana ny hydraulic fiatoana. Amin'ny hydraulic fiatoana, taratasy vy FABRICATION dia notsorina, rehefa manampy mamorona bends amin'ny mifanapaka efa voafaritra mialoha. Rolling milina ihany koa ny ampiasaina ao amin'ny taratasy vy FABRICATION mba hanangana vy ho boribory fizarana.
Iray hafa tena ifantohan'ny taratasy vy FABRICATION dia welding. Taorian'ny lamba faritra vy no niforona, niangona sy Tack welded an-toerana. Various welding teknika dia azo ampiasaina amin'ny taratasy vy FABRICATION mba tsy ho hita maso hafa warping na kilema. Izany dia ahitana ny mampiasa fixture mahery, welding amin'ny fomba nivembena, nandrakotra ny vy amin'ny fasika mandritra ny fizotran'ny hihena, ary nanitsy dingana manokana.
Diso nanitsy vy nandritra ny taratasy vita vy FABRICATION tamin'ny Oxy-acetylene fanilo. Miaraka nanitsy, hafanana dia ampiharina ny vy ao amin'ny mora, Linear lamaody. Mampiasa fomba izany, dia tena mahay welder afaka manala na dia manan-danja warpage.
Mba hamita ny taratasy metaly FABRICATION dingana, ny metaly dia matetika fasika poaka aty, dia primed sy nandoko. Avy eo, ny vita voakasiky dia apetraka araka ny fepetra arahana ny mpividy, ary ilay tapa-damba dia nandinika sy alefa.